Fifidianana : Antoka ho an’ny mangarahara ny fahamarinan-toeran’ny lalàna -
AccueilRaharaham-pirenenaFifidianana : Antoka ho an’ny mangarahara ny fahamarinan-toeran’ny lalàna
Fifidianana : Antoka ho an’ny mangarahara ny fahamarinan-toeran’ny lalàna
Efa ambetin-dresaky ny rehetra, indrindra ny tontolo politika amin’izao fotoana ny resaka fifidianana. Efa nilaza ny fahavononany hiroso amin’izany ny fitondram-panjakana. Na izany aza, manantitrantitra hatrany ny hisian’ny fifidianana tsy hitondra amin’ny korontana ny fitondrana, ary nanamafy izany ny filoha Hery Rajaonariamampianina, tamin’ny fandaharana “fotoam-bita”. “Nivoaka tamin’ny fifidianana ny filoham-pirenena. Noho izany, dia miaro izany izy. Ny fifandimbiasam-pahefana amin’ny alalan’ny fifidianana ihany no antoky ny fitoniana sy fahamarinan-toeran’ny fitondrana” araka ny fanazavan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Tanjon’ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana ankehitriny ny hisian’ny fifidianana ara-demokratika, ara-dalàna ary eken’ny rehetra mba hisorohana ny korontana sy ny ady ateraky ny tsy fitoviam-pijery amin’ny fizotry ny fifidianana. Efa tafiditra tamin’ny hetsika hiatrehina izany ny fisian’ny fakan-kevitra avy amin’ireo hery velona rehetra avy amin’ny faritra samihafa sy ny ankolafy isan-karazany. “Efa nisy ny dingana nahafahana namolavola antotan-kevitra ahafahana manatsara ny fifidianana ao anatin’ny fanarahan-dalàna tanteraka. Niainga tamin’ny fanehoan-kevitra izany, ary efa naravon’ny komity iraisan’ny minisitera voakasiky ny fifidianana, ary naverina nojeren’ireo rehetra nanome hevitra” araka ny fanazavan’ny filoha hatrany. “Lalàna hentitra, tsy mifanipaka amin’ny làlam-panorenana ary miaro ny tombontsoam-pirenena hitondrana ny fifidianana. Antoka lehibe ho an’ny fifidianana mangarahara ny fahamarinan-toeran’ny lalàna rehetra mikasika ny fifidianana”, araka ny fanazavana nentin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Anisan’ny mbola nantintraterin’ny filoha ny hisian’ny fanitsiana ireo andininy manahirana ao anatin’ny lalàm-panorenana sy ny fanomezana fahefana feno ny fokontany amin’ny andraikitra raisiny eo amin’ny fiatrehana ny fifidianana, indrindra ny fandrafetana ny lisi-pifidianana.
Etsy ankilan’izay dia natsidiky ny filoha ihany koa ny fanavaozana ireo tranga samihafa mba hampangarahara ny fifidianana. Ao anatin’izany ny rafi-pifidianana izay efa ilaozan’ny toetr’andro sy ny teknolojia, ary vahaolana amin’izany ny fametrahana ny lalàn’ny fifidianana ho lalàna fototra fa tsy ho lalàna fehizoro intsony. Ny fanitsiana lalàna momba ny fitondran-tenan’ireo voakasiky ny fifidianana, na ireo mpiasam-panjakana mpikarakara ny fifidianana, na ny mpanao politika mandray anjara amin’ny fifidianana, na ny fiarahamonim-pirenena mpanara-maso… Nasiany teny ihany koa ny mahakasika ny famatsiam-bolan’ny antoko politika, mba hisian’ny fanaraha-maso ny vola sy ny fotoana ampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra. “Antoka lehibe ialan’ny ahiahy rehetra ny fahavitan’ny fanitsiana samihafa, ary hanomezana ny ezaka hametrahana ny fitoniana eto amin’ny firenena”, hoy hatrany ny filoha.
voyeur house dans Fikambanana masoandro mody-NAHAZO FANAMPIANA AVY AMIN’NY VADIN’NY FILOHA
stucco contractors dans L’incendie du Rova de Manjakamiadana, 20 ans plus tôt
concrete steps dans Kaomina Renivohitra Antananarivo-MIEZAKA MANAKANA NY TETIKASAN’NY FILOHA
masonry contractors dans Rallye ASACM : Mathieu intraitable de bout en bout !
Deirdre MacDonald dans « RAMILY TEODORIN ! »
Governemanta Ntsay : Hivarotra Bois de Rose
Raha efa nolavin’ny fivorimben’ny komity maharitry ny Fifanarahana momba ny varotra iraisam-pirenena, ny harena voajanahary tandidonin-doza, na SITES, andiany faha-69 tany Soisy, ny tolo-kevitra momba ny fizotran’ny fanisana ny tahirin-kazo sarobidy malagasy, sy ny drafitra ...Tohiny
Rajoelina sy Ravatomanga : Mikasa hamerina ny 2009
Fanodinkodinam-bolam-panjakana : Voasazy dimy taona an-tranomaizina i Nivo Ratiarison
Fandalovan’ny rivodoza Enawo : Nanome fanampiana 50 tapitrisa Ar ny HVM
voyeur house: Link exchange is nothing else however it is just placijng the other person's website link on youjr page at appropriate…
stucco contractors: I don't know if it's just me or if perhaps everybody else experiencing problems with your site. It appears as…
concrete steps: Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add…